Maxamed Sh. Jawaari oo ku dhawaaqay musharaxnimada Guddoonka baarlamaanka(Sawiro & Muqaal) – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa maanta markale ku dhawaaqay inuu yahay musharax guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
Maxamed Sheikh Cismaan ayaa hadalkaan shaaciyay kadib markii Shir jaraa’id uu ku qabtay hoyga uu ka degen yahay magaalada Muqdisho.
Labadii maalin ee lasoo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacayay kulamo kala duwan oo Jawaari looga dalbanayay inuu markale isku sharaxaa guddoonka baarlamaanka.
Guddiga qaban qaabada doorashada Guddoonka baarlamaanka ayaa maalin ka hor shaaciyay in waqtiga qabashada musharaxnimada ku egtahay maalinta beri oo Khamiis ah.
Afhayeenkii baarlamaanka Maxamed Sheekh Jawaari, wuxuu sheegay inuu yahay musharax guddoomiyaha baarlamaanka, isagoo balanqaaday inuu wax badan ka qaban doono howlaha baarlamaanka horyaala.
Masuuliyiin ay kamid yihiin xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ku amaanay Jawaari waxqabadkiisa muddada afarta sano ee uu xilka guddoonka baarlamaanka hayay.
Musharaxnimada Guddoomiye Jawaari ayaa xiisad gaar ah ka biiraya doorashada sanadkaan, maadaama musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha ay kala wataan musharixiin kala duwan.